ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူမှ ဝင်္ဂဘော်ဆင်စခန်းအား လာရောက်ကြည့်ရှု
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ (ပဲခူး) ================== ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့၊ ညနေ(၄)နာရီအချိန်က ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူမှ ပဲခူး မြို့နယ်၊ ဝင်္ဂဘော်ကျေးရွာ၊ ဝင်္ဂဘောဆင်စခန်းသို့ ရောက်ရှိပြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဝင်္ဂဘော် ဆင်စခန်း တာဝန်ခံတို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ အထွေထွေမန်နေဂျာ(ရုံးချုပ်) ဦးလှမိုးအောင်နှင့် ဒုတိယ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးထွန်းထွန်းဦးတို့က ဝင်္ဂဘော်ဆင်စခန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ Power Point ဖြင့် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာ၊ ဒုတိယ သမ္မတက လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက် လမ်းညွန်မှာကြားခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းက ဝင်္ဂဘော်ဆင်စခန်းမြေ အမည်ပေါက်ရရှိရေး၊ ခြံစည်းရိုးကာရံနိုင်ရေးတို့ ဆောင်ရွက်ရန် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဒုတိယသမ္မတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့သည် ဝင်္ဂဘော်ဆင်စခန်းအတွင်းရှိ ဆင်များအား …
ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းချိန်၌ ပဲခူးတိုင်း​​ဒေသကြီး၏ အဓိကဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ချက်များအား သိရှိနိုင်ရန် အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ (ပဲခူး) =========================== ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၁)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဧည့်ခန်းမသို့ အမေရိကန်သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးချုပ်ထံ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ အမေရိကန်သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel က ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းချိန်၌ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍများ၊ အဓိကဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များအား မေးမြန်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဝန်ကြီးချုပ်က ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းချိန်တွင် အဓိကစိန်ခေါ်မှုများအနက်မှ အရေးကြီးဆုံးသည် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာလည်း (၂၁)ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများ၌လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဒေသအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် …
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ (ပဲခူး) ======================= ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၈)ရက်နေ့၊ နံနက်(၉)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ တော်ဝင်ဟံသာခန်းမ၌ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ ရှေးဦးစွာ ဝန်ကြီးချုပ်က အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသည် ယနေ့အချိန်၌ မည်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက်မဆို အလွန်အရေးပါလျက်ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ရာတွင် ဌာနဆိုင်ရာများအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည် မြင့်မားနေရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာစကားနှင့် ဆက်နွယ်နေမှုများရှိကြောင်းနှင့် ယခုလို ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား အင်္ဂလိပ်စာ စွမ်းရည်မြှင့် သင်တန်းပို့ချပေးခဲ့သော သင်တန်းဆရာ ဦးဖြိုးဇာနည်ဝင်းအား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် သင်တန်းဆရာ ဦးဖြိုးဇာနည်ဝင်းမှ သင်တန်းအတွေ့အကြုံများအား ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပြီး၊ ဝန်ကြီးချုပ်က သင်တန်းသား/သူများအား သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်နှင့် သင်တန်းဆရာအား အမှတ်တရဂုဏ်ပြုလက်မှတ် …
ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြည်ပကုမ္ပဏီ(၂)ခု လာရောက်တွေ့ဆုံ
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ (ပဲခူး) ======================== ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၇)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီ:အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဧည့်ခန်းမသို့ ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြည်ပ ကုမ္ပဏီ(၂)ခုမှ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။ ရှေးဦးစွာ PT. Amerta Indah Otsuka Company မှ ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း POCARI အားဖြည့်အချိုရည် ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံကိုလည်းကောင်း၊ HANSAE ကုမ္ပဏီမှ ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း အထည်အလိပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အထည်ချုပ်စက်ရုံအကြီးစား ဆောက်လုပ်နိုင်ရေးကိုလည်းကောင်း အသီးသီး ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ ဝန်ကြီးချုပ်က အဆွေတော်တို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများသည် ဒေသခံပြည်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း၊ တိုင်းပြည် အတွက်လည်း အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများစွာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စက်ရုံများတည်ဆောက်မည့် ဒေသ၌ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးစသည့် အခြေခံအချက်အလက်များ ရရှိ ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများအတွက် …
ပြည်သူလူထုအား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် အချိန်ပြည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရန် ခုတင်(၅၀)ဆံ့ တိုင်းရင်းဆေးရုံ ပဲခူးမြို့တွင်ဖွင့်လှစ်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ (ပဲခူး) ================================== ပဲခူးမြို့၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဓမ္မစေတီလမ်းတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၇)ရက်နေ့ နံနက်(၈)နာရီအချိန်က ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူလူထုအား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် အချိန်ပြည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရန် ခုတင်(၅၀)ဆံ့ တိုင်းရင်းဆေးရုံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ ရှေးဦးစွာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ဦးမောင်မောင်ရွှေ၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဌေး၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်သိန်းဌေး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးဌာနမှူး ဦးစိုးမိုးတို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းက ခုတင်(၅၀)ဆံ့ တိုင်းရင်းဆေးရုံ အဆောက်အဦသစ် ဆိုင်းဘုတ်အား စက်ခလုပ်နှိပ် ဖွင့်လှစ်ပေးကာ ကြေးပြားကမ္ဗည်းမော်ကွန်းကို နံ့သာရည်များ ပက်ဖြန်းပြီး အဆာက်အဦအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြသည်။ ထို့နောက် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့က အမှာစကားပြောကြားပြီး Diamond City ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ခုတင်(၅၀)ဆံ့ တိုင်းရင်းဆေးရုံ အဆောက်အဦသစ်နှင့် (၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတို့ကို ဒုတိယ …
Page 234 of 403« First...210220230232233234235236»240250260...Last »